Rahoviana ny fampiasana ireo teny mahazatra amin'ny 'You' amin'ny teny Espaniôla
Fantaro ny fotoana ampiasana ny fomba mahazatra hoe 'ianao'
Ny fahafantaranao ny fahasamihafana dia afaka manampy anao hivezivezy bebe kokoa
Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny esperanto Ohatra tsy ampy amin'ny teny esperanto ido Anarana iombonana amin'ny teny ido Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy amin'ny teny ido Zavatra tsy ampy / ary matetika no loharanon-drivotra ho an'ny mpianatra espaniola. Na dia tsy misy fitsipika izay manan-danja mandrakariva amin'ny famaritana hoe iza no ampiasaina, ny toro-làlana etsy ambany dia hanampy anao amin'ny làlana marina rehefa manapa-kevitra ny amin'ny mpisolo anarana ianao.
Ireto misy antony sivy, fara fahakeliny, amin'ny fampiasana ireo mpisolo anarana amin'ny teny espaniola:
Rahoviana no hampiasa ilay anarana mahazatra sy fombafomba?
Voalohany, raha misy ny fisehoan-javatra, ny fahasamihafana fototra eo amin'ny mpisolo anarana mahazatra sy ny mpampiasa dia ny fampiasana azy taloha ho an'ny namana sy ny mpianakavy, raha toa kosa ny fombafomba dia ampiasaina amin'ny toe-javatra hafa. Azonao atao ny mieritreritra ny maha-samihafa azy amin'ny maha-fahasamihafana azy, farafaharatsiny any Etazonia, eo amin'ny fifampiresahana amin'ny olona amin'ny anarany voalohany na zavatra hafa ara-dalàna. Ny loza ateraky ny fampiasana ny endrika mahazatra rehefa tsy tokony, dia mety ho hitanao manompa na manaiky ny olona lazainao, na dia tsy misy izany aza. Amin'ny ankapobeny, tokony hampiasa ny endriky ny "anao" ianao raha tsy misy antony tokony hampiasana ilay endrika efa fantatra. Amin'izany fomba izany, ianao dia tonga amim-pahavitrihana toy ny olo-manan-tsaina fa tsy mampidi-doza.
Toe-javatra azo ampiharina amin'ny endrika fombafomba
Misy toe-javatra roa izay matetika ampiasain'ny endrika formaly:
Amin'ny ankabeazan'ny Amerika Latina, ny endriny mahazatra ( vosotros ) dia efa efa lany tamingana ho an'ny resaka isan'andro. Ny ray aman-dreny dia hiresaka na dia ny zanany aza izay efa nomanina , zavatra iray izay mahagaga ny mpandàla ny olona any Espana.
Misy faritra vitsivitsy, indrindra fa any amin'ny faritr'i Kolombia , izay tsy dia mahazatra loatra ny endri-tsoratra informaly.
Ampiasao amim-pilaminana ny fomba mahazatra
Ity no toerana azo antoka hampiasana ilay endrika efa mahazatra:
Rehefa miresaka amin'ny olona ao amin'ny fianakaviana na namana tsara.
Rehefa miresaka amin'ny ankizy.
Rehefa miresaka amin'ny biby fiompy.
Matetika, rehefa misy olona manomboka miteny aminao hoe tú . Amin'ny ankapobeny anefa, tsy tokony hamaly amin'ny endrika efa fantatra ianao raha toa ka olona iray manana fahefana eo aminao (toy ny polisy) ny olona izay miresaka aminao amin'ny maha tú anao.
Rehefa misy olona mampahafantatra anao fa tsy mety ny miresaka aminy na amin'ny fomba mahazatra. Ny matoanteny for "miteny amin'ny olona iray amin'ny teny mahazatra" dia ny fampiasana azy.
Rehefa mihaona amin'ny namanao, raha ny fomba amam-panao any amin'ny faritra ho an'ny sokajin-taona misy anao sy ny sata sosialy. Raiso ny baiko avy amin'ireo manodidina anao sy ilay olona izay miresaka aminao.
Amin'ny fomba amam-panao kristianina maro, rehefa mivavaka amin'Andriamanitra.
Any amin'ny faritra sasany, dia misy mpisolo anarana mahazatra hafa , vos , ampiasaina amin'ny dingana maro samihafa. Any amin'ny faritra sasany dia misy ny matoanteny mifangaro aminy. Ny fampiasanao ny tú , na izany aza, dia ho takatra amin'ireo faritra ireo.
Fampidirana ny fampiasana Gerunds
The Progressive Tense Perfect
Anarana iombonana amin'ny teny alemaina Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy amin'ny teny alemaina
Ahoana ny fomba fampiasana ny rindrina sy ny dessins amin'ny teny frantsay
Amin'ny fampiasana 'Estar' sy 'Haber' ho an'ny 'misy' sy 'misy'
Fandikana ny matoanteny Verb 'Will'
Couvrir - amin'ny fonony
Ahoana ny fametrahana "Déranger" (hanelingelina)
Amin'ny fampiasana ny matoanteny "Volver"
Coaching sy Feedback amin'ny Diving
Angel Colors: Ilay Hazavana Pink Pink, tarihin'i Archuel Chamuel
Ny olana momba ny Redox Reaction Balance
Misy olona tia anao, Atoa Hatch
Sarin'ny kintana iray: Don Bloomfield
Ny fiantraikan'ny fitsipika fototra iombonana
Endriky ny matoanteny amin'ny teny esperanto
Fomba 10 mba hisorohana toy ny kodiarana
Inona no Atao hoe Rarivato?
Famaritana ny Moiety
Adoption Search - Ahoana no Fomba Ahitana ny Fianakavianao?
Ireo Top 6 John Scofield Albums
Ny fiantraikany ratsy amin'ny vakansy amin'ny fianarana
Top 10 Fanambarana teo amin'ny Tantaran'ny Tantara fahiny
Hetsi-panoherana telo misongadina amin'ny Obama
Fikarakarana ny maty
Fihetseham-po ho an'ny mpandahateny - Famonoana omby
Ny fomba atao amin'ny Batemy ao amin'ny Fiangonana LDS (Mormon)
Fiovana miandry ny fiarovana ara sosialy COLA?
Ady lehibe faharoa: USS Alabama (BB-60)
Ivory Soap Trick - Foanana ao amin'ny Microwave
Ny tantaran'ny DJing